संक्रमित युवतीसँगै कतार एयरवेजको विमानमा नेपाल आउने यात्रु ४४ जिल्लाका (कहाँका कति ?)
Wednesday, 25 Mar, 2020 5:59 PM
१२ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएर टेकु अस्पतालमा उपचाररत १९ वर्षीया युवतीसँगै कतार एयरवेजको विमानमा दोहाबाट आउनेहरु ४४ जिल्लाका रहेको खुलेको छ । फ्लाइट नम्बर क्युआर ६५२ विमान १७ मार्च (चैत ४ ) मा दोहाबाट काठमाडौं आएको थियो । ती युवतीसँगै यो विमानमा आएकाहरुको अहिले सरकारले खोजी गरिरहेको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतबाट न्यूजसेवालाई प्राप्त सूचनाअनुसार ४४ जिल्लाका यात्रुको ठेगाना (जिल्ला) खुलेको छ । अन्य कतिपयको खुलेको छैन । त्यसैले, यात्रुमध्ये केही थप जिल्लाका पनि हुनसक्ने देखिन्छ । केही यात्रु भने भारतका पनि छन् ।
४५ जिल्ला, कहाँका कति ?
• व्यक्तिगत गोपनियताका कारण सम्बन्धित व्यक्तिका नाम भने खुलाउन असमर्थ छौँ– सम्पादक ।